Tobanka magaalo ee ugu halista badan caalamka oo ay Muqdisho ku jirto. Wax ka ogow. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Tobanka magaalo ee ugu halista badan caalamka oo ay Muqdisho ku jirto....
Tobanka magaalo ee ugu halista badan caalamka oo ay Muqdisho ku jirto. Wax ka ogow.
Warbixinta sanad laha ah ee uu daabacay wargeyska top10zen ayaa waxa uu kaga hadlay 10-ka magaalo ee sanadkii tagay 2020 ugu khatarta badan dhanka Amaanka waxa uu sheegay in Magaalooyinkan la isku weeraro sidoo kalena la isku dilo waxay dambiyadu gadheen heerkii ugu sareysay.
1: Magaalada Muzaffarabad ee dalka
Magaalada Muzaffarabad waxaa caadi ka ah rabshado ka dhaca, waxaana ay noqdeen kuwa lamid ah nolosha caadiga ah, dibad baxayo rabshada wata iyo howlgalo ciidamada Boolisku sameeyaan oo amaanka sii xumeeya ayaa ka dhaca.
2: Magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil:
Sanad waliba waxa yimaada Malaayiin Dalxiisa yaal ah, waxaa intaas sii dheer dambiyada ka dhaca oo sii kordhaya, qiyaas la sameeyay waxaa lagu ogaaday in todobaad 40 qof ay u dhintaan falal amaan darro oo ka dhaca Magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil.
3: Magaalada Kinshasa ee Jamhuuriyadda Dimuquraadiga Congo:
Waxaa Kinshasa caadi ka ah boobka iyo jeebsiibka inta badanna waxaa la kulma caruurta, waxaa dadka lagula taliyaa in daaqadaha aysan furin, saas ay tahayna gadiidka dadweynaha ee Magaalada Kinshasa waa kuwa u nugul falal amni darro, marwalbana la kulma.
4: Magaalada Ciudad Juarez ee wadanka Mexico:
Ciudad Juarez waxaa loo aqoonsaday Magalada ugu rabshadaha badan caalamka, waxaa ka dhaca weeraro ay geestaan kooxo ka ganacsada maan-dooriya, in dumarka lagu xadgudbana caan ayeey ku sii tahay, heerka dilalka ayaa ah maalin 130 qof.
5: Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya:
Muqdisho waxaa burburiyay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay, shacabka qaar ee Muqdisho waxeey ku noolyihiin gudaha dalka iyagoo barakacsan.
6: Mgaalada Cape Town ee dalka South Africa:
Cape Town si isadaba joog ah ayaa dadka looga dhacaa alaabahooda, waa lagu dilaa waana lagu afduubtaa, sababta ugu weyn ee rabshadahan waa kala duwanaasho dhanka dhaqaalaha, sidoo kale Cape Town waa mida ugu khatarta badan koofur Africa.
7: Magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq:
Heerka falalka ka dhanka ah amaanka iyo dambiyada ayaa cirka isku shareeray tan iyo markii ciidamada Mareykanka laga howlgaliyay Ciraaq, qaraxyada Ismiidaaminta iyo kuwa loo adeegsado gawaarida aya si joogta ah ugu dhaca Baqdaad, sidoo kale dadka ayaa lakala iibsadaa.
8: Magaalada Caracas ee dalka Venezuela:
Magaalada Caracas dadka dalxiisa yaasha ee imaanaya ayaa lagu wargeliyaa iney feejignaadaan, dibad baxayo ayaa dhaca, kooxo hubeysanna wadooyinka ayey ka fuliyaan weeraro ay kamid yihiin: afduubka, dhaca, boobka waana kuwa maalin kasta dhaca.
9: Magaalada Santa Domingo ee Jamhuuriyadda Dominican:
Heerka dambiyada ayaa marna kor u kaca marna hoos u dhaca, inta badan dalxiisa yaasha ayaana ah dhibanaayaasha ugu badan, waana Magaalada ugu khatarta badan Jamhuuriyadda Dominican.
Detroit waa magaalada ugu khatarta badan Mareykanka, heerka falalka Dambiyada waa 2,135 sababta ugu weyn ee rabshadaha ayaa ah- hoos u dhac dhanka dhaqaalaha iyo shaqo la’aan jirta awgeed.
Previous articleDil ka dhacay Suuqa weyn ee Bukaaraha
Next articleQISOOYIN TAARIIKHDA GALAY
Ergay gaar ah oo ka socda dalka Qatar ayaa la filayaa inuu toddobaadka dambe booqasho ku yimaado Soomaaliya. Ergaygan gaarka ah ayaa lagu magacaabaa Dr....
Dowladaha Masar iyo Sudan oo markale digniin adag u diray Ethiopia...